Antalya Lawyer | Biraon'ny birao Mehmet Dursun, Biraon'ny mediation
Antalya Lawyer, fampiharana sy fampiharana lalàna. Mpisolovava Antalya
Antalya Criminal Advocate - Mpisolovava mahery setra sy mpisolo vava heloka bevava
Antalya IT Advocate - Mpisolovava amin'ny aterineto
Antalya Mpitsoa-ponenana an-tserasera, raharaha momba ny fanavotana
Mpanolo-tsaina Malpractice, Mpisolovava momba ny fahasalamana, Mpisolovava momba ny fahasalamana
Antalya Consumer Advocate, Advocate Consumer Rights
Antalya Mpisolovava ny mpiasa, Mpisolovava mpampiasa, Business Lawyer Lawyer
Lalàna momba ny lova
Mpisolovava ny Lova Antalya, Lova Redd-i, Heritage Sharing Advocate
Mpisolovava ao amin'ny Lalàna any Antalya
Lalàna momba ny fiantohana
Antalya Assurance Advocate, Mpisolovava Mpisolovava
RAHARAHAM-BAOVAO SY FAMPIANARANA
Antalya Mpisava Lalàna momba ny fisaraham-panambadiana, Alimony, Mpisolovava mpiaro
ECHR Fampiharana manokana
Idea Art Works Lalàna
Antalya Patent Attorney, Idee sy Art Work Advocate, Advocate Trademark,
Mpisolovava mpiara-miasa, Antalya mpiara-miasa
Antalya Real Estate Advocate, mpampanoa lalàna, Advocate Land
Lalàna momba ny hetra
Mpisolovava momba ny hetra, Mpisolovava
ny mpisolovava Afaka mifandray amin'ny consultation ianao.
foto-kevitra ao amin'ny Ireo mpisolovava mahay anay dia miaraka aminao foana.
Antalya Mpisolovava Mafy, fampiharana ny lalàna, ara-barotra ny lalàna,-baovao ny teknolojia ny lalàna, ny fianakaviana ny lalàna, tena toetrany ny lalàna sy ny payables no tena ara-dalàna rehetra sampana ny lalàna, ary koa manaiky ny iraisam-pirenena fitsarana fanapahan-kevitra ihany koa ny manome ara-dalàna fandikan-teny asa hanatanterahana ny sy ny fivarotana ny tena toetrany ambany vahiny. Vao haingana ny biraon'ny nahazo laza lehibe eto amin'izao tontolo izao ny virtoaly vola, vola virtoaly sy ny fifanakalozana vola virtoaly fitrandrahana, fanarenana ny fitarainana ireo olana ary koa manolotra tolotra Consulting mikasika ny fampiasam-bola.
Torkia sy Antalya Dursun Mehmet koa izao tontolo izao ho toy ny tanjona Advocacy Office, manerana izao tontolo izao handray fepetra mba tsy very ny zon'ny mpanjifa isika, raha ny zony dia fandaniam-poana ny dia ny refund ny haben'ny ny tanan 'ny lalàna.
Mpisolovava Mehmet Dursun
Mpanelanelana - Mpisolovava - Lehiben'ny mpampiasa
Mpisolovava-mpanelanelana momba ny mari-pamantarana
Mpisolovava Kadriye ERSOY
Mpisolovava Antalya Kadriye Ersoy
Mpisolovava Zeki Dursun
Hizaha ny Full Profile an'i Zeki
M.Cüşavir Bilal no nitafy
Bilal Kilim, mpanolotsaina ara-bola
Fantatrao. ary Software Consultant
Manana metatra. Davut Dursun
Jereo ny Full Profile an'i Albina
Mifandraisa mivantana amin'i Emel
Hizaha ny sarin'i Full Turan an'i Turan
ecz.çağla ny gürlek
Hizaha ny Full Profile an'i Çağlayan
Sina - Alemana - Okraina - Rosia - Alzeria - Tonizia - India
Ny sehatry ny oniversite Hahazo valiny mahomby.
Ny olon-drehetra dia mety tsy hahomby eo amin'ny lafiny rehetra, fa raha manana faritra maro ny manam-pahaizana manokana sy ny raharaham-barotra fahombiazana ao miaraka aminao raha mahafoy ho an'ny manam-pahaizana.
Lalàna ho an'ny daholobe
Fahaizana sy fanabeazana
TORO LALANA FANATSARANA B.BAŞVURU
FANAZAVANA FANAMBY AMIN'NY FIRENENA
Jereo ny fanofanana rehetra
FIANAKAVIANA SY FAMPANDROSOANA
MPITONDRA REAL ESTATE
TONTOLO IAINANA SY LABORARY
IDEAS AND ART ARTES
FAMPIANARANA ISAKA SY DOKUMENT
Isika eto ...
Izahay dia manompo amin'ny mpisolovava anareo manokana izay miantoka ny lalàna momba ny tany sy ny ala.
Real toetrany ary indrindra eto amin'ny firenentsika dia tena 2B misy fifandirana ara-dalàna bebe kokoa momba izay fianarana sy nanao fianarana ambony hiandrandra hamaha ny olana miaraka amin'ny mpisolovava boky ...
Fampahalalana momba ny 2B
Bitcoin, Blockcha sy ny kajy amin'ny solosaina, ary miaro ny zo ara-dalàna ho toy ny mpanao heloka bevava rehetra, sivily sy ny vola rehetra virtoaly.
Izahay nanorina voalohany fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, Fikambanan'ny Virtual Sandam-bola mba hiarovana ny zo amin'ny manam-pahaizana manokana sy ny mpanolo mpisolovava ao Torkia.
Mpisolovava Antalya / Arovantsika ny zon'ny vahiny ao amin'ny firenentsika ary ny zon'ny olom-pirenentsika amin'ny lalàna iraisam-pirenena.
Vorontsiloza amin'ny fitsarana eo anoloan'ny masontsika sy ny andrim-panjakana vahiny, raha isika miaro ny zon'ny olom-pirenena sy ny firenena ny manam-pahefana avy amin'ny Fitsarana.
Ny taona 20 dia miaina amin'ny anaranao any amin'ny faritra rehetra
Ny birao, ny fampiharana ny lalàna, ara-barotra ny lalàna,-baovao ny teknolojia ny lalàna, ny fianakaviana ny lalàna, tena toetrany ny lalàna sy ny payables no tena ara-dalàna rehetra sampana ny lalàna, ary koa manaiky ny iraisam-pirenena fitsarana fanapahan-kevitra ihany koa ny manome ara-dalàna fandikan-teny asa hanatanterahana ny sy ny fivarotana ny tena toetrany ambany vahiny. Vao haingana ny biraon'ny nahazo laza lehibe eto amin'izao tontolo izao ny virtoaly vola, vola virtoaly sy ny fifanakalozana vola virtoaly fitrandrahana, fanarenana ny fitarainana ireo olana ary koa manolotra tolotra Consulting mikasika ny fampiasam-bola. Torkia sy Antalya Dursun Mehmet koa izao tontolo izao ho toy ny tanjona Advocacy Office, manerana izao tontolo izao handray fepetra mba tsy very ny zon'ny mpanjifa isika, raha ny zony dia fandaniam-poana ny dia ny refund ny haben'ny ny tanan 'ny lalàna.
Tolotra Advocacy ary ny fomba fiasantsika
Ny mpahay lalàna sy ny ekipa ao amin'ny faritra ny fahaizany rehetra dia misy foana ny hanao izay rehetra ny asa ilaina ho anao UnUzdAdIrlAr.
Fampisehoana amin'ny Pause
Ireo mpisolovava anay dia solontenanareo ho solotenan'ny zò anao amin'ny fitsarana sy ny andrim-panjakana rehetra.
Ny tolotra mpisolovava rehetra ilaina hiarovana ny zon'ny orinasa manerana izao tontolo izao sy indrindra amin'ny firenentsika dia omen'ny mpisolovava antsika.
toro-hevitra rehetra ilaina mba hiarovana ny zo manokana, ny zon'ny tsirairay, ny zo fananana, sns noho ny anatrehany, ny mpisolovava sy ny mpiasa rehetra nanome zavatra mahakasika manerana izao tontolo izao indrindra fa ao Torkia.
Tolotra manokan'ny tsirairay sy ny orinasa
Ireo mpisolovava dia mandray ny fepetra ilaina rehetra mba hiarovana ny zonao ara-dalàna ary hijaly noho ny fahaverezan'ny zo amin'ny sehatra fampiharana, solontenany, fiarovana, varotra, fampiasam-bola mifandraika amin'ny tanàna sy iraisam-pirenena.
Ny mpisolo vava dia manaraka akaiky ny fivoaran'ny zava-misy ankehitriny.
ny mpisolovava fanazavana informatika
Haino aman-jery sy horonan-tsary manerana ny gazety ary fanadihadiana manokana.
Miaraha amin'ny olana amin'izao fotoana izao avy amin'ny Mpisolovava
Ny vaovao sy ny ankapobeny ao amin'ny sahan'ny lalàna dia hita ao amin'ny lahatsoratra.
Azonao atao ny mahita ny fanovana ny fomba lalàna sy araka ny lalàna amin'izao fotoana izao tranga-olana. Tsy mampihatra ny fihaonana ara-dalàna ny ara-dalàna fifandirana any an-tsaha aho nanatona ny fanaraha-maso ny asa fanompoana mahomby indrindra fivoarana sy ny lalàna vaovao eo amin'ny lalana marina raha mbola lalàna.
Manaiky i Konu Feel mba hanontany anay ny raharaha rehetra eo amin'ny sehatra ara-dalàna. "
Momba ny lalàna momba ny fiarovana ny data ankapobeny (GDPR)
-tena, Dalàna momba ny zon'olombelona
Fepetra fitantanana Kvkk
Ny fitahirizana sy ny fandroahana ny angon-drakitra manokana
Inona ny angon-drakitra manokana, fiarovana ny angon-drakitra 2019
Mpanolotsaina mpanelanelana Mehmet Dursun
Fanadinadinana momba ny rafi-pandaminana vaovao
Vakio ilay fanadihadiana
Resadresaka momba ny Rafi-pandaminana mediatran'ny varotra